February 2019 – Page 31 – aajnepal
अंगालो हालेर सुतेबापत लाखौं कमाउँछिन् यी महिला ! हेर्नुहोस यस्तो छ रहस्य !
मानिसहरुले आफ्नो जिवन पाल्नको लागी केहि न केहि पेसामा अबद्ध हुने गर्छ्न । चाहे त्यो राम्रो पेसा होस या नराम्रो । कतीपयले त आफ्नो पेसालाई नै धर्म बनाएका हुन्छ्न । तर यस्तो पेसा अहिले सम्म […]
मानिसको चाहाना पनि अचम्मको ! २ करोड खर्च गरेर वक्षस्थललाई मुटु बनाइन् यी महिलाले !!
जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्ने उखानै छ । मान्छेलाई इच्छा जाग्यो भने आखिर जे पनि गर्न पछि पर्दो रहेनछ । बेलायतमा एक महिलाले धेरै समय तथा रकम खर्च गरेर आफ्नो स्तनलाई मुटुको आकार दिएकी छिन् […]
यी सपना देखे भाग्य बलियो हुन्छ, हेर्नुस् ती सपना के के हुन्
भनिन्छ सपना त्यो हो जसले निदाउन दिँदैन। तर कमै मात्र मानिससँग यसखालको सपना देख्नसक्ने क्षमता हुन्छ। तर आम मानिसले भने निदाउँदा मात्र सपना देख्छन्। हामी सबै आम मानिसहरु मध्यरातमा अनेकन सपनाहरु देख्छौं कतिपय भयानक हुन्छन् […]
जिउँदो माछा खाने प्रचलनका बारेमा त सायद धेरै जनालाई थाहा होला। यस्तो ट्रेन्ड पुर्वबाट आयातित हो जुन अहिले बिश्वभरि नै खुल्ला रुपमा स्वीकार गरिसकिएको छ। तर कोरियनहरु अक्टोपस, त्यो पनि जिउँदै खान्छन भन्ने कुरा सायद […]
पहिलो यौन सम्बन्धका बारेमा के सोच्छन महिलाहरु ?
स्त्रीले आफ्नो जीवनमा केही न केही फरक र उत्ताउलो खालको यौन अनुभव गर्न चाहने देखाएको छ । मौका पाउँदा उनीहरुले अनौठो अनौठो यौनिक अभ्यासको परीक्षण समेत गर्न मन पराउँने तथ्य उक्त अध्ययनबाट देखिएको हो । […]
यस्तो ढुंगा, जसलाई फुटाउँदा रगत निस्किन्छ पत्यार लागेन एक चोटी भिडियो हेर्नुहोस
पृथ्वीमा कैयौँ प्रकारका ढुंगा पाइन्छन् । तर सबै पत्थरको एउटा साझा विशेषता भनेको यी सबै निर्जिव वस्तु हुन् । तर कुनै पत्थर टुक्रिँदा वा त्यसलाई काट्दा सजिव प्राणीको शरीरबाट जस्तै रगत निस्किएको सुन्नुभएको छ ? […]
सेक्स इन्कार गरे महिलालाई पुरुषको मुखमा पिसाव गर्ने अधिकार
संसारका कयौ देशमा परम्परागत र कानुनी रुपमा महिलालाई केवल आफ्नो श्रीमानसँग मात्र यौन सम्बन्ध कायम गर्ने अनुमति दिइएको छ। तर, संसारको एउटा यस्तो स्थान पनि छ, जहाँ महिलालाई अनौठा अनुमतिहरु प्रदान गरिने छ। जुन सुनेर […]
डेटमा गएका प्रेम जोडिले पोखरीमा यस्तो हर्कत गरेपछि – भिडियो हेर्नुस्
हरेक मान्छे जवान हुन्छ र हरेकले विपरित लिगंप्रति आर्कषण अवश्य हुन्छ यस्तै चिनको एक स्थानमा एक प्रेमी प्रेमीका घुम्न गएछन् । प्रेमी प्रेमीका मिलेर डेटमा गए र पौडी खेल्न थाले उनीहरुको कुराकानीको विचमा पोखरीमा पौडिने […]
काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको रुपमा रहेका अमेजनका सीईओ जेफ बेजोसमाथि ठुलो आपत्त आइलागेको छ । अमेरिकाको नेशनल एनक्वाइरर टैबलाइडले उनलाई फसाउँन खोजेको उनले आरोप लगाएका छन । बेजोसका अनुसार, “नेशनल एनक्वाइररका वकीलले मेरो […]
यो भिडियो हेरेर तपाइ हासोले मुर्छा पर्नुहुनेछ ।
जोकोही पनि आफ्नो जिवनमा खुशीयाली चाहन्छ । जिवनको मुख्य उदेस्य भनेको पनि आफ्नो जिवन खुशीसाथ सुखमय ढङले बिताउनु हो । हासो नै खुशी हो । जो हासिरहन सक्छ्,जो हासमुख छ्,उसैको जिवन सफल हुन्छ र सबैले […]